Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Everton Soares Child Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius with the nickname "Obere Onion“. Anyị Everton Soares Child Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Everton Soares nwata Akụkọ rue ubochi- Nyocha.
Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta, ndụ onwe onye, ​​na ụdị ndụ ya, wdg.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye egwu na-agba ọsọ ọsọ, nka, na mmecha ikike dị ka a hụrụ na asọmpi 2019 COPA America. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Everton Soares nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ banyere nwatakịrị Everton Soares - mmalite ndụ na ezinụlọ:
Malite, aha ya bụ Everton Sousa Soares. Everton ma ọ bụ Cebolinha dị ka a na-akpọkarị ya a mụrụ na 22nd ụbọchị nke March 1996 na ndị nne na nna Brazil na obodo Maracanaú, Brazil.
Amụrụ na ezinụlọ dị umeala n'obi, ndị nne na nna Everton bụ ndị na-akpata ego na-etiti ụlọ na-enweghị ike ị nweta obere ego maka ezinụlọ ha dum. Dika nwatakiri, igwu bọọlụ bidoro site na mgbe ọ mara etu esi aga ije.
Everton malitere football dịka ụzọ nke ya si achọta nkasi obi pụọ n'ihe ọjọọ ndị dị na nwata. O mekwara ka football bụrụ onye na-ajụ ya ka ọ ghara ime mkpebi ọjọọ.
Everton toro na obodo ebe ọtụtụ nde ụmụ nwoke ga-agbanye akpụkpọ ụkwụ ha kwa ụbọchị na-enwe olileanya na ha agaghị arụ ọrụ ọzọ mana ha na-achọ ịbụ ndị ịgba ọsọ ọkachamara.
Nye ya, ọ bụ maka ịghọ ndị ịgba ọsọ ụkwụ na ịchọrọ inye ezinụlọ ya ọdịnihu dị mma.
Everton Soares Childhood Akụkọ - Agụmakwụkwọ na Ọrụ:
Everton dị ka ụmụaka ndị ọzọ lere anya ma chọọ ịdị ka nnukwu ndị nlereanya ya - Kaka, Robinho, Ronaldo de Lima. Ọ maara na ịchọrọ ịghọ ọkachamara n'ịgba ọsọ nwere ike iduga na ọrụ na-aga nke ọma ma na-akwụ ụgwọ.
Dị nnọọ ka ụmụaka ndị Brazil ndị ọzọ, e meghere ọnụ ụzọ nke ohere maka ya igwu egwu egwuregwu n'okporo ámá nke o gwuru n'ọnọdụ ọjọọ.
Ọ bụ ezie na Everton kwadoro nkà ya n'ịgba bọl n'okporo ámá, ọ nweghị ego zuru ezu iji zụta bọl nke aka ya, ya mere o ji bọọlụ nke sọks ochie na-egwu naanị na ezinụlọ ya.
Everton nọgidere na-agbaso nkà ya ruo mgbe ọ bụ 12, afọ ọ na-akpọ ịga ịga ụlọ ọrụ na Fortaleza. N'ụzọ na-enye obi ụtọ, agụụ na mkpebi siri ike ya ịghọ pro hụrụ ya ka ọ na-eme ule ma debanye aha na ụlọ akwụkwọ mmuta ahụ.
Everton Soares Biography - Ndụ Mmalite Ndụ:
Dịka onye na-eto eto sitere na ezinụlọ dị umeala n'obi, Everton chere ihu ogologo njem maka ọzụzụ maka ọgbakọ mbụ ya, Fortaleza Esporte Clube. Nke a bụ ụlọ ọgbakọ dị na Fortaleza, na steeti Ceará, Brazil.
"Everton biara site na igwe. Ọ ga-agagharị gburugburu 6km iji ruo ala ọzụzụ. A na-echekarị ya, n'okwu ole na ole, mana ọ na-abụkarị aka ochie. " echeta Márcio Caetano, bụ onye na-eto eto n'oge gara aga.
Onye na-eto eto Everton jiri otu awa na-agagharị na njem nke 6km site na ezinụlọ ya gaa n'ala ọzụzụ.
Ndị mụrụ ya n'agbanyeghị na enweghị ọgaranya na-akwado nkwado nwa ha nwoke ka ọ bụrụ ọkachamara. Ọ bụ enyemaka nna ya nke nyeere ya aka inweta ohere na klọb.
Dịka ọmụmaatụ, e nwere asọmpi ebe Everton adịghị egwu ma nna ya bịara na klọb ahụ ịlụ ọgụ maka itinye nwa ya nwoke n'egwuregwu ahụ tupu ụlọ ọrụ ahụ enye ya ohere nke bịara dị ka ihe ijuanya dị mma. Everton batara n’ogige ahụ wee gbata goolu atọ n’ime nkeji iri atọ.
Ogba ya na mmegide ya jidere anya ndị Gugmio scouts bụ ndị kwenyesiri ike na ha chọrọ ịbanye na nwata ahụ. Ihe omume a mere n'afọ 2012.
Everton Soares Bio - tozọ a ma ama Akụkọ:
Banye na nkwekọrịta ahụ wetara ya mgbe ọ dị afọ iri na ụma ga-apụta ịkwaga 3,800km gaa na nsọtụ mba ahụ.
Ọ bụghị ụzọ dị anya na-atụ ụjọ na-eto eto na-atụ anya, MA enyi nwanyị ya nke ọ na-achọghị ịhapụ.
Ebube Okporo Ụzọ nke Everton Akụkọ
Ezigbo mgbagwoju anya Everton nwere ịhụnanya miri emi ma nwee mmasị na ya nke ukwuu, mmetụta nke mere ka ọ ghara ilebara ọrụ ya anya.
O chere na ọ bụrụ na ọ gaa ebe ahụ, ọ ga-etinye ya n'ihe ize ndụ. Mkparịta ụka ya na onye nchịkwa ya nyere aka dozie esemokwu ahụ. N'okwu onye nchịkwa ya;
"M gwara ya na nwa agbọghọ ahụ nwere ike ichere ya, mana Gremmio agaghị. Nwa nwoke ọzọ nke kachasị mma mgbe ọ gasịrị ga-eji dochie ya na ụlọ ahụ mara mma. Mgbe ahụ, ọ ga-akwa ụta na nwata ahụ ga-abụ ọgaranya, ọ ga-abụ ogbenye.”Onye nchịkwa Everton dụrụ ọdụ.
Onye ọzọ nọ n'osisi ahụ kwukwara, sị: 'Ọ bụrụ na nwa agbọghọ a achọghị ichere maka gị, ị ga-ahụ onye Ịtali ma ọ bụ nwa agbọghọ German. '
Roberto Firmino Child Story Plus Na-emeghị Ihe Nkọwa Na-adịghị Agbanwe
Everton Soares Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Mgbe o kwenyechara ịhapụ enyi nwanyị ya na Fortaleza, ihe ịma aka nke abụọ nke Everton bụ iji mee ka ihu igwe na-ekpo ọkụ na-eche banyere ụlọ ọhụrụ ya.
Okpomọkụ nwere ike ịdata na nso ebe oyi na Porto Alegre, nke dị nso na ala Argentina na Uruguay. Oge oyi na steeti Rio Grande do Sul dị oke njọ na Everton chere na ọ ga-ada, mana ụlọ ọrụ ahụ kwadoro ya.
N'ịbụ onye na-amalite n'isi ụlọ ọrụ ahụ, Everton nwetara aha ya bụ "Cebolinha"Nke pụtara n'ụzọ nkịtị"Obere Onion".
Ihe kpatara eji akpọ Soares bụ Little Onion.
Aha aha a sitere n'aka otu onye mara mma nke Brazil mara oke mma nakwa n'ihi na o yiri ka osisi akwukwo nri di.
Afọ isii mgbe ọ nọsịrị na klọb ahụ, ihe ndị na-eme football nke Brazil nyeere ndị òtù ya aka imeri Copa Libertadores na Grêmio na 2017 na-eme ka ndị klọb nke elu Europe rịọ na ikpere ha maka mbinye aka ya.
Ogologo Everton Na-ewu Onwe Ya Akụkọ.
Oge Everton mara mma maka Gremio kwenyesiri ike na ndị ọrụ nchịkwa Brazil ka ha tinye ya na ndị otu egwuregwu 2019 Copa America. Everton diri meteoric ịrị elu na asọmpi 2019 Copa America.
Everton Soares COPA America Mmeri- Nbili Na-ewu ewu Akụkọ.
Inyere mba ya aka inweta mmeri a hụrụ ya ka ọ bụrụ otu n'ime ihe egwuregwu bọọlụ kachasị mma na kọntinent ahụ. A ga-echeta ncheta nke ndị Brazil dị oke ọnụ ahịa na asọmpi Copa America nke 2019. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Everton Soares Love Akụkọ banyere Isaranieri (Lisa Ranieri):
Site na Everton Soares na-ebili ka a ma ama, ajụjụ ndị dị na egbugbere ọnụ onye ọ bụla bụ; Ọnye na-bụ Enyi Nwanyị Everton? Ọ ka na-enwe mmekọrịta ọ hụrụ n'anya onye ọ hapụrụ n'ihi ọrụ ya?…
Anyị amachaghị banyere azịza nke ajụjụ ndị a. Agbanyeghị, n'azụ ndị egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị mara mma - ma ugbu a nwunye nke aha ya bụ Isaranieri (nke pụtara Lisa Ranieri pụtara n'ụzọ nkịtị) na akaụntụ mgbasa ozi ya.
Everton Soares na nwunye.
Na-ekpe ikpe site na akaụntụ mgbasa ozi ọha na eze nke Everton, o doro anya na ịhụnanya abụọ ụmụ nnụnụ kekọtara eriri na Saturday, 29th nke December 2018.
Everton Soares n'ụbọchị agbamakwụkwọ ya.
Tupu alụmdi na nwunye ha, ndị di na nwunye ejiriwo nwa nwanyị mara mma nke Everton hụrụ n'anya nke ukwuu gọzie ya. N'ihi eziokwu a, ọ nwere ike ịbụ na Lisa Ranieri bụ "Otu enyi nwanyị”Onye nọrọ mgbe Everton gara Gremio gwuo egwu.
Everton Soares na Ezinụlọ.
N'elu ihe ukwu nwa bụ n'ezie ịtụnanya papa na onye Everton. Na-ekpe ikpe site na foto dị n'okpuru ebe a, ọ bụ nwa ya nwanyị n'enweghị obi abụọ ọ bụ naanị onye zuru obi ya.
Everton Soares na Nwa Nwaanyị.
Everton Soares Bio - Ndụ Nke Onwe:
Ịmara Everton Soares Ndụ nke onwe gị site na pitch ga-enyere gị aka ịchọta ihe zuru ezu banyere àgwà ya.
Everton Soares- Banyere ndụ ya.
Malite na, Everton nọọrọ onwe ya ma nwee nnukwu ọchịchọ na ịchụso ihe ịga nke ọma. Ọ na-amakarị ihe ọ chọrọ ma ọ bụ ya kpatara ya ji kewapụ ezinụlọ ya mgbe ọ dị obere.
N'agbanyeghị nickname ya egwu "obere yabasị", Everton anọwo na-abụkarị ụdị onye mmadụ wepụrụ. Ọ bụ onye dị jụụ nke na-adịghị eme mkpesa, onye nwere ike ịnọ n'etiti ndị mmadụ n'ekwughị okwu.
Ndụ Everton Soares:
A na-akwụ ego na ọtụtụ nde pound maka Everton Soares n'ekele maka ọrụ siri ike ya na mkpebi ya ịghọ ndị ịgba egwu ọkachamara.
N'elu nkwụsị, Everton na-ekwusi ike dị ka ọ dị na ụgbọ ala ya na osimiri. Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ ime otu nde mmadụ ndụ.
Everton Soares- Eziokwu banyere ndụ ya. Ebe E Si Nweta Esportes.
Dị ka n'oge ederede, Everton bụ onye n'agbanyeghị ibi ndụ okomoko anaghị egosipụta akụ na ụba ya na mgbasa ozi. Ọ maara ihe banyere ijikwa aha ya ma ghara itinye ego dị ka onye nzuzu.
Imefu oge ya na ego ya n'ụsọ osimiri na n'oké osimiri nwere mmetụta dị ukwuu na ahụ ike nke mmụọ ya.
Ndụ dị iche iche nke LifeStyle.
Ezigbo Ezinụlọ Ezinụlọ:
Dị ka n'oge ederede, ezinụlọ Everton na-ebi ndụ nzuzo na nke dị ala na Brazil n'agbanyeghị paparazzi mgbe niile na prowl na ọtụtụ ụzọ isi jikọọ na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ma nne ya, nna ya, ụmụnne ya ndị nwoke, ụmụnne ya ndị nwanyị, na ndị ikwu ya niile na-enweta uru dị ugbu a site n'ịkụnye echiche siri ike n'ime onwe ha.
Ihe Everton ntinye onwe ya ijide n'aka na ndị mụrụ ya, ụmụnne ya ndị nwoke, ụmụnne ya ndị nwanyị, na ndị ikwu ya nwere ntụsara ahụ yiri ntinye ya na pitch.
Eziokwu nke Everton Soares:
IKPE: Everton bụ onye dị nnọọ njikere banyere okwukwe Ndị Kraịst ya. Ọ na-eto Chineke maka ohere ọ bụla o nwetara n'ọrụ ya.
Everton Soares Okpukpe.
Ọbụna na akaụntụ mgbasa ozi ya nke na-agụ 1.1 nde ụmụazụ dị ka n'oge ederede, Everton nwere onye nzọpụta ya "Jizọs" edere n'ọnọdụ moniker ya. Ọpụpụ, ọ na-ekwupụta okwu banyere ọrụ Jizọs na-arụ na ndụ ya.
Nkwenkwe Okpukpe Ndị Kraịst nke Ndị Kraịst na-aga n'ihu.
Eziokwu Ụdị: Nkọwa maka egbugbu Everton nwere ike jikọtara ya na nzụlite ya siri ike yana ọ bụ eziokwu okwukwe Ndị Kraịst ya.
Achọpụtabeghị ihe ọ bụla gbasara egbugbu ya. Site na ịlele foto dị n'okpuru ebe a, ị nwere ike ịmata ihe dị ka egbu mmụọ Ghost Rider na aka nri ya yana Jizọs n'obi ya.
Eziokwu Sodị Tatoo nke Everton Soares. Ebe E Si Nweta Esportes.
Everton Soares Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Video Nchịkọta
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Everton Soares nke ụmụ anyị akụkọ akụkọ gbasara eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.